1.In la sameeyo guddi hawolwadeeno caafimaad oo ka kooban khubaro caalami ah iyo kuwo maxalli ah si dalka loogu diyaariyo xarumo looga hortago laguna xakameeyo faafida caabuqa Covid19.
2. In la joojiyo safarrada howlwadeennada caalamiga ah ee ku nool Gegida Diyaaradaha Caalamiga ah ee Aadan Cadde iyo qeybaha kale ee dalka. Sidoo kale, in iskaashi lagala sameeyo hay’adaha caalamiga ah borotokoollada sida loo xaddido xiriirka ka dhexeeya shaqaalahooda dalka ku sugan iyo Soomaalida.
3. In dhaqaale dheeraad ah loo qoondeeyo u diyaargarowga xaaladda degdegga ah, la-socoshada, borotokoolka maareynta, iyo waxbarashada dadweynaha iyo wacyigelinta.
4. Diyaarinta xarun isku-dubarrid ee xaaladda degdegga ah ee Covid-19 iyo goobo karantiil oo magaalooyinka waaweyn laga sameeyo.
5. U qorsheynta hal isbitaal in uu noqdo isbitaal koowaad ee la tacaalo caabuqa gobol kasta si loo daweeyo loona maareeyo kiisaska looga shakisan yahay gudaha dalka.
6. In dowlad-goboleedyada la siiyo agab iyo qalab taageero loona diro khuburo si tillaabooyin ka hortag iyo xakameyn loo qaado.
7. Hubinta helitaanka awoodda baaris ee dalka gaar ahaan magaalooyinka oo ay ku jirto qalabka ilaalinta qofka ee looga baahan yahay daryeelka bukaanka.
8. In la xoojiyo la-socodka iyo raadraaca taabashada sida ku xusan borotokoolka WHO.
9. Hawlgelinta xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay ee daryeelka caafimaadka si ay u taageeraan wax-ka-qabashada cudurka.
10. Kordhinta waxbarashada guud iyo wacyigelinta iyo sidoo kale diyaarinta khadka tooska ah ee qaranka si loogu taageero muwaadiniinta inay soo wacaan si ay u helaan macluumaad sax ah. Tani waxay muhiim u tahay in la hubiyo in argagax laga fogaado haddii uu cudurku faafo.